﻿ झुम्काका युवाहरुलाई आत्मनिर्भर बनाउने योजना छ
शनिबार १८, बैशाख २०७८
सामाजिक काम र जेसिसको काममा नै व्यस्त भएको छु ।
भर्खरै जेसिसको अध्यक्ष हुनुभएको छ । कस्तो महसुस गर्नु भएको छ ?
जेसिसको अध्यक्ष भएपछि थप कार्यभार प्रदान भएको र आफूले समाजमा सकारात्मक काम गर्नुपर्ने दायित्व बढेको महसुस गरेको छु ।
२. जेसिस कस्तो संस्था हो ?
जेसिस विशुद्ध व्यक्तित्व र नेतृत्व विकास गर्ने संस्था हो । समाजको बुझाईमा यसले सामाजिक काम गर्छ भन्ने भएता पनि विशेष गरि यसले व्यक्तित्व विकास गर्ने काम गर्छ । १८ देखि ४० वर्षका युवाहरुको व्यक्तित्व र नेतृत्व विकासमा जेसिसले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ । नेतृत्व विकासको लागि सिक्ने र सिकाउने वातावरण जेसिस संस्थाले प्रदान गरेको हुन्छ ।
जेसिसमा लाग्नुपर्छ भनेर कसरी उत्प्रेरित हुनुभयो ?
म २०१४ सालबाट जेसिसमा आवद्ध छु । विभिन्न स्थानमा भएका जेसिसका कार्यक्रमहरुमा हाम्रो संस्थापक अध्यक्ष पूर्वअध्यक्षहरुले बोलाउने गर्नुहुन्थ्यो । यसरी विभिन्न कार्यक्रमहरुमा जाने क्रममा उहाँहरुले समाजमा पुर्याएको योगदान, आफूले बनाएको सामाजिक व्यक्तित्वको पहिचान देखेर आफूलाई पनि समावेश हुन इच्छा बढ्यो । जुम्का जेसिसको स्थापना र गर्दै आएका कामहरुबारे भनिदिनु न ।
झुम्का जेसिस इटहरीले मातृत्व प्रदान गरेर २००६ मा स्थापना भएको हो । जेसिसमा युवाहरु आबद्ध हुनु आवश्यक छ । किनभने १८ देखि ४० वर्ष उमेर समुहका हरुले मात्रै यो संस्थामा नेतृत्व पाउनेछ । ४० वर्ष नाघेपछि यो संस्थामा कुनैपनि नेतृत्व लिन पाइदैन ।
यो संस्था व्यक्तित्व र नेतृत्व विकास गर्ने संस्था भएको कारण पनि युवाहरु आवद्ध भएर आफूले सिकेका कुरा समाजमा लाने, अन्य संघसंस्थामा सहकार्य गर्ने, देशमा बिग्रदो अवस्थामा रहेको राजनैतिक प्रणाली सुधारका लागि पनि चेतनाको विकास हुनेछ । जेसिसमा एक व्यक्ति एक पद–एक कार्यकालको सिद्धान्त लागू गरिएको हुन्छ । मैले पनि अबको कार्यकाल पछि मलाई जतिसुकै बहुमत प्राप्त भएपनि नेतृत्वमा फेरि आउन मिल्दैन । यो संस्थामा नेतृत्व हस्तान्तरणमा कहिल्यै विवाद हुँदैन ।
यो संस्थाको सुन्दर पक्ष एक व्यक्ति एक पद–एक कार्यकालको प्रणालीले समाजमा नयाँ सन्देश प्रदान गरेको छ । अन्य कुनैपनि संघ संस्थामा दशौं बिसौं वर्ष सम्म नेतृत्व कब्जा गरेर बसिरहेको हामीले देख्दै आएको छौं । तर जेसिस संस्थामा त्यस्तो व्यवस्था छैन । अबका युवाहरुले जेसिमा आवद्ध भई संस्थाको नियम सिकेर समाजमा जाने हो भने विद्यमान नकरात्मक कुराहरुलाई रोक्न ठूलो टेवा पुग्नेछ ।
जेसिस संस्थामा आवद्ध भई उत्पादकको रुपमा युवाहरु रहेमा सँधै भरि नेतृत्वमा रहि रहने स्थिति रहँदैन । जेसिसमा अनुशासन, नेतृत्व विकास जस्ता विषयवस्तु समावेश गरिएको हुन्छ । जेसिसमा आवद्ध भई आफ्नो जीवनलाई सामाजिक रुपमा रुपान्तरण गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ । यसकारण पनि सबै युवाहरुलाई यस संस्थामा आवद्ध हुन आग्रह गर्दछु ।
यस संस्थाले पहिलेदेखि नै केही सामाजिक कामहरु गर्दै आएको छ । रक्तदान कार्यक्रम, कोरोना संक्रमणको अवस्थामा खाद्य सामाग्रीहरुको वितरण लगाएतको सामाजिक कामहरु गर्ने गरेको छ । समाजमा जेसिस संस्थाको पहिचान स्थापित गर्नको लागि जेसिसले थुप्रै कामहरु गर्दै आएको छ । स्वास्थ्य शिविरहरु सञ्चालन गर्ने, विपन्न परिवारको बालबालिकालाई पढ्ने वातावरणको सिर्जना गर्न शिक्षण सामाग्रीहरुको वितरण गर्ने जस्ता विभिन्न किसिमको सामाजिक कामहरु गर्दै आएको छ ।
३. जेसिसको पूर्वनेतृत्व भन्दा फरक ढंगबाट के कस्ता काम गर्ने योजना छ ?
विगतभन्दा फरक किसिमका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने तयारी छ । हाम्रो झुम्का जेसिसको भवन निर्माण गरि आफ्नै भवनमा कार्यलय सचिवालय व्यवस्थापन गर्ने लगायतको कामहरु सम्पन्न हुनेछन् । त्योभन्दा फरक कार्यक्रमअन्तर्गत व्यवसायिक तालिमहरु सञ्चालन गर्ने, जेसिसमा आबद्ध रहेका सदस्यहरुलाई आत्मनिर्भर बनाउन शेयरबजार लगायत अनलाइनको माध्यमबाट के कसरी युवाहरुले आफ्नो आयस्रोत बढाउन सक्छन् भन्नेतर्फ जुम्का जेसिसले योजना छ ।
४. जेसिसले कुनैपनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा लाग्ने खर्चको व्यवस्थापन कसरी गर्नुहुन्छ ?
विशेष गरि जेसिसलाई बाहिरबाट सहयोग आउँदैन । जेसिसभित्र पनि हाम्रो एउटा समुह हुन्छ । यसरी सदस्यहरु बीचमै सहकार्य गरेर आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने गरेका छौं । त्यसका साथै नगरपालिका स्थानीय सरकारसम्म सहकार्य गरेर केही बजेट लिन्छौं । अधिकांश बजेट हाम्रै सदस्यहरुबाट जुटाउँछौं ।
५. सरकारले रामधुनीका युवाहरुको लागि के कस्ता व्यवस्था गरेको छ ? के गर्यो भने यहाँका युवाहरुको लागि राम्रो हुनेछ ?
युवाहरुको लागि सरकारले स्वरोजगारको अवसरहरु सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ । यसकारण सरकारले स्वरोजगारको अवसर सिर्जना गर्न नसक्दा अधिकांश युवाहरु कुलतमा फसेका छन् । सरकारले राम्रा राम्रा नीति तथा कार्यक्रमहरु ल्याउन पर्छ, युवायुवतीहरुमा सकारात्मक सोचको विकास गर्नको लागि चेतना फैलाउन पर्छ । युवाहरुलाई रोजगारीको सन्दर्भमा सरकार अग्रसर हुनुपर्छ ।
कति युवाहरु कुन क्षेत्रमा आवद्ध छन् ? युवाहरुको संख्या कति हो ? भन्ने विवरण संकलन गरि युवाहरु कुन क्षेत्रमा काम गर्न चाहन्छन् भन्ने कुराको अध्ययन गरि उचित युवाहरुलाई रोजगारीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो । त्यो रोजगारीको व्यवस्थापन नगरेको कारण युवाहरुमा नकारात्मक कुराहरुको सिर्जना हुने त्यसले समाजमा हिंसात्मक गतिविधि बढ्दै गईरहेको अवस्था देखिन्छ ।
६. अन्त्यमा के भन्न चाहनु हुन्छ ?
रामधुनीका सम्पूर्ण युवाहरुलाई आफ्नो नेतृत्व र व्यक्तित्व विकास गर्दै राष्ट्र सम्मको नेतृत्व लिनका लागि झुम्का जेसिसमा आवद्ध हुन अनुरोध गर्छु । यहाँ सिकेका कुराहरु समाजमा सिकाउनु होस् भन्न चाहन्छु ।